Indlela yokwabelana ngesithombe kumyalezo wabucala nge-Instagram | I-Androidsis
Indlela yokwabelana ngesithombe kumyalezo wabucala kwi-Instagram
Kungenzeka ukuba ngexesha elithile bona iposti ku-Instagram ocinga ukuba inokuba nomdla komnye wabafowunelwa bakho. Ukuba sifuna loo mntu abone ifoto, isicelo sisinika ithuba lokuba sabelane ngaso ngohlobo lomyalezo wangasese. Inkqubo emnandi kakhulu, ethi ke ivumele loo mntu ukuba afumane le foto ngendlela elula.
Ukuba ngamanye amaxesha ufuna ukwabelana ngefoto kumyalezo wabucala kwinethiwekhi yoluntu, awuyi kuba nangxaki. Emva koko siza kukubonisa amanyathelo ekufuneka siwalandele ukuze sikwazi ukuyenza.
Xa silufumene upapasho / ifoto embuzweni esifuna ukwabelana ngayo, kuya kufuneka sijonge ii icon ezibonakala phantsi kwayo. Siza kubona ukuba i icon enje kunye ne icon yeenkcazo iyavela, kwaye ecaleni kwabo yeyona inomdla kuthi. Yimpawu ebonakala ngathi yindiza yenqwelomoya ngokwefom, enkosi yokwabelana ngalo kupapasho.
Ke ngoko, sicofa kolu phawu kwaye kuvula iwindow entsha, apho Kuya kufuneka sifumane umnxeba esifuna ukuthumela umyalezo wabucala kuye, kunye nefoto. Sijonga loo mntu emva koko sicofe iqhosha lokuthumela. Iya kusivumela ukuba sigqibe umyalezo ngesicatshulwa esithile, ukuba siyafuna, kwaye singasithumela ngoku.
Isicelo sisivumela ukuba sabelane ngale foto nabo bonke abantu esibafunayo, kodwa kufuneka sizongeze zonke nganye nganye. Kodwa kunokwenzeka ukuba wabelane ngayo ngaphezu komntu omnye, ukuba ucinga ukuba olo shicilelo lunomdla kuninzi lwabafowunelwa bakho.
Njengokuba ubona, yabelana ngesithombe kumyalezo wangasese kuthungelwano lwentlalo oludumileyo kulula. Amanyathelo ekufuneka elandelwe alula kwaye awuthathi xesha lide.
Olunye uqeqesho olunomdla:
Ungabacima njani abalandeli kwiakhawunti yakho ye-Instagram
Ungazikhuphela njani iifoto, iividiyo okanye amabali kwi-Instagram
Uqinisekisa njani iakhawunti yakho ye-Instagram
Uyicoca njani imbali yokukhangela kwi-Instagram
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Indlela yokwabelana ngesithombe kumyalezo wabucala kwi-Instagram
Inkqubo yeenkwenkwezi ezi-5 yokuvelisa !!
Iimifanekiso ze-OnePlus 6T ezintsha ziyafumaneka ngoku